नायिका शिल्पा सेट्टीले आफ्ना श्रीमान् राज कुन्द्रालाइ पो’ र्न फिल्म बनाउन साथ दिएकी थिईन ? यस्तो छ प्रहरीको अनुसन्धान « Etajakhabar
नायिका शिल्पा सेट्टीले आफ्ना श्रीमान् राज कुन्द्रालाइ पो’ र्न फिल्म बनाउन साथ दिएकी थिईन ? यस्तो छ प्रहरीको अनुसन्धान
बिजनेसम्यान राज कुन्द्राको पक्राउ पछि उनकी पत्नी तथा बलिउडकी महसुर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी माथि कैयौ आरोपहरु आईरहेका छन् । धेरैले शिल्पा पनि उनको पतिको पोर्न बिजनेसमा जोडिएको भन्दै आरोप लगाईरहेका छन् ।
तर मुम्बई पुलिसका अनुसार शिल्पाको कुनै लिंक छैन पतिको यस्तो कार्यमा । मुम्बई पुलिसले एक प्रेस कन्फ्रेन्स गर्दै पो ‘र्नो ग्रा फिको मामलामा बिजनेसम्यान राज कुन्द्रा संग पत्नी तथा अभिनेत्री शिल्पाको कुनै सक्रिय भुमीका नरहेको बताएको छ ।
मुम्बई पुलिस कमिश्नरले बताए अनुसार क्राईम ब्रान्चले फेब्रअरी २०२१ मा अश्लिल फिल्म बनाउने तथा त्यसलाई अलग अलग ओटीटी प्लाटफर्ममा रिलीज गर्ने बिषयमा केश दर्ता गरेको थियो । यसपछि पुलिसले कैयौ अलग अलग ठाउँमा छापामारेको थियो । यस मामलामा राज कुन्द्रा पहिला ४ जना ब्यक्ति समेत पक्राउ भएका थिए ।
लण्डनमा बस्दै आएका आफ्ना नातेदार प्रदिप बक्सीलाई राजले भिडियो पठाउने गरेका थिए । तर मुम्बई पुलिसका अनुसार शिल्पाको कुनै लिंक छैन पतिको यस्तो कार्यमा । मुम्बई पुलिसले एक प्रेस कन्फ्रेन्स गर्दै पो’ र्नो ग्रा फि को मामलामा बिजनेसम्यान राज कुन्द्रा संग पत्नी तथा अभिनेत्री शिल्पाको कुनै सक्रिय भुमीका नरहेको बताएको छ ।
मुम्बई पुलिस कमिश्नर मिलिन्द भारम्बेले भने– हामीलाई अहिले सम्म शिल्पा शेट्टीको कुनै सक्रिय भुमिका नरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । हामी यो बिषयमा जाँच गरिरहेका छौ । हामी पीडितहरु संग अपील गर्छौ कि उनीहरु अगाडि आउन तथा क्राइम ब्रान्च मुम्बईमा सम्पर्क गरुन् । हामी उचीत कार्बाही गर्छौ ।